आलुको सेवन गर्दा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ, टुसा उम्रिएको र हरियो आलु विषाक्त ! जानी राखौ « Onlinetvnepal.com
आलुको सेवन गर्दा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ, टुसा उम्रिएको र हरियो आलु विषाक्त ! जानी राखौ
Published : 14 March, 2019 2:10 pm
पर्याप्त मात्रामा कार्वोहाइड्रेट र फाइबर पाइने आलुमा भिटामिन सी, भिटामीन बी६, पोटासियम र म्यानगनिजको पनि राम्रो स्रोत हो । भुटेर, तारेर, पकाएर, उसिनेर वा पोलेर जसरी पनि खान मिल्ने आलुको सेवन गर्दा धेरै क्लालोरी उर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर, आलुको सेवन गर्दा हामी विशेष ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ होइन भने यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा हानी गर्न पनि सक्छ । आलुको मुलरुपमा परिवर्तन आएको छ भने त्यस्तो आलु खानु हुँदैन ।
विशेषगरी केही भागमा हरियो भएको आलु खान हुँदैन । माटोमुनि फल्ने आलु यसै पनि हल्का माटो युक्त हुने हुनाले राम्रोसँग धोएपछि मात्रै यसको रंग देख्न सकिन्छ ।यदि आलुको रंग खैरो, रातो भन्दा फरक हरियो, बैजनी र वा कालो छ भने त्यो आलु अब खान लायक छैन ।
१. हरियो आलु हुन्छ खतरनाक : आलुको रंग यदि हरियो देखियो भने यो खराब भएको छ । हरियो आलु क्यान्सरको कारण बन्न सक्छ । आलु हरियो त्यतिखेर हुन्छ जब यो माटोबाट बाहिर निस्कन्छ र सूर्यको किरण त्यसमा सिधै पर्छ । यसले आलुमा सोलनिन लेभल बढ्छ । त्यसैले आलुलाई सँधै घामको किरण सिधै नपर्ने तथा चिसो स्थानमा राख्नुहोस् । यसो गरेमा आलु लामो समयसम्म सुरक्षित रहन्छ ।
हुन सक्छ क्यान्सर : आलुमा क्लोरोफिल र सोलनिन नामक एसिडको मात्रा बढी छ भने यसको सेवन गर्नाले उल्टी, डायरिया, टाउको दुख्ने वा क्यान्सरसम्म हुन सक्छ । हरियो रंगको आलु खाएपछि ३० मिनेटसम्म असर देखिन सुरु हुन्छ । कहिले कहिले यसमा ८-१२ घन्टा पनि लाग्न सक्छ । ग्यास्टोइन्टेस्टाइनल र न्यूरोलोजिकल लक्षण सबैभन्दा पहिले नोटिस गर्न सकिन्छ ।
२. चाउरी परेको आलु नखानुहोस् : कहिलेकाँही पटक आलु धेरै समय भण्डार गरेर राख्दा चाउरी पर्छ । यस्तो त्यतिखेर हुन्छ जब आलु धेरै दिनसम्म राखिएको हुन्छ । चाउरी परेको आलु खान पनि स्वास्थ्यको लागि हानीकारक हुन्छ किनभने यसको सेवनले शरीरमा टक्सिन फैलन थाल्छ ।
३. टुसा उम्रिएको आलु पनि नखानुहोस् : टुसा उमि्रएको आलु खान पनि स्वास्थ्यको लागि हानीकारक हुन्छ । टुसा उमि्रएको आलुमा सोलनिन र ग्लाइकोलोकाल्ड्स नामक एसिड परिवर्तन हुन्छ । जुन स्नायू प्रणालीको लागि धेरै हानीकारक हुन्छ । त्यसैले टुसा उम्रिएको आलु खेतमा रोप्नको लागि त ठिक हुन्छ तर, खानको लागि ठिक हुदैँन ।